Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay in isku shaandheyn lagu sameynayo Xukuumada | Salaan Media
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay in isku shaandheyn lagu sameynayo Xukuumada
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa maanta ku dhawaaqay in isku shaandheyn lagu sameynayo Xukuumada si loo ballaariyo hey’adaha dowladda, xilli maanta ay ku beegan tahay hal sano kadib markii loo magacaabay xilka Ra’iisul Wasaaraha.
Shir jaraa’id oo uu goor dhow ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu Ra’iisul Wasaaraha kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay isku shaandheynta in muddo ahba la hadal hayay in Xukuumada lagu sameynayo si loo ballaariyo.
“Isku shaandheynta wuxuu keeni doonaa ballaarin, maadaama halka soano ay noqotay mid wax badan ay ku hirgaleen, maxaa yeelay shan sano ayay xukuumadihii hore ay ku qaadan jirtay inay wax ugu hirgalaan, waa ku kalsoonahay, daruuf ayaa keeneysa”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Saacid.
Ra’iisul Wasaaraha ma sheegin waqtiga la ballaarinayo iyo tirada ay noqoneyso, hase ahaatee waxaa uu cadeeyay inay ka fursan waayeen in is bedel la sameeyo, si loo ballaariyo Xukuumada.
Waxaa uu sheegay in dhinacyo badan wax ka eegeen ay xal noqotay in Xukuumada la ballaariyo, maadaama dhaqaalaha caalamka ugu deeqay ay noqotay mid la ballaariyay.
Mr Saacid ayaa sidoo kale sheegay in Xukuumadiisa ay wax badan qabatay, isagoo ku dheeraaday arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada oo Xukuumadiisa ay aheyd waxyaabaha ay qabatay.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa oo wax laga weydiiyay weerarkii Baraawe ee Ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ay fuliyeen, isagoo sheegay inay soo dhoweynayaan cid kasta oo gacan ka siineysa la dagaalanka Al-Shabaab.
Ra’iisul Wasaaraha ayaan sheegin inay wax ka ogaayeen weerarka, waxaana uu xusay in Caalamka ay kala kaashanayaan la dagaalanka waxa uu ugu yeeray Argagixisada oo qatar ku ah Gobolka iyo Caalamka.
Hadalkan Ra’iisul Wasaaraha uu ku dhawaaqay ee ah in isku shaandheyn lagu sameynayo Xukuumada ayaa ku soo beegmeysa, iyadoo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka ay mooshin ka dhan ah Xukuumada wadaan, kaasoo lagu wado in dhowaan la horgeeyo Baarlamaanka.
6-da October sanadkii 2012 ayay aheyd markii Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu Ra’iisul Wasaare u magacaabay Cabdi Faarax Shirdoon oo aan horay wax badan siyaasada laga aqoon, marka laga reebo inuu ahaa nin Ganacsade muddo ku noolaa Kenya.